> Resource> Video> MKV Player: Olee otú Play MKV Files
MKV bụ ndọtị maka Matroska Multimedia Container faịlụ. Dị ka a ọhụrụ multimedia akpa format, ọ nwere ike encapsulate iche iche iche iche nke audio, video na ndepụta okwu n'ime otu file- nnọọ ike na mgbanwe. Ma, nsogbu bụ: otú na-egwu MKV Files?
Ọ bụ ezie na Windows 'ndabere Windows Media Player bụ mara mma nnukwu, ọ dị mwute na ọ na-adịghị na-akwado na playback nke MKV faịlụ. Ọ bụrụ na ị ka chọrọ na-egwu ha na-eji Windows Media Player, ị chọrọ nwụnye a codec. Ada ụda obere bit mgbagwoju? Ọma, gini mere ịgbanwee ọzọ mgbasa ozi ọkpụkpọ nke nwere ike na-akwado na-akpọ MKV faịlụ? Ebe a a free ma dị ike video player- Wondershare Player - na ẹkenam-ekwe ka ị na-adị mfe ele MKV video faịlụ, na-enweghị wụnye ọzọ media Player ma ọ bụ video decoders ma ọ bụ codecs. Dị nnọọ download a software, ị ga-enwe na-egwu nile MKV video faịlụ.
1 Mwepụta na Player na Nịm Ntọala
Mgbe nbudata na na na wụnye Wondershare Player, a shortcut ga-egosi na gị na desktọọpụ. Ugboro abụọ pịa ẹkedori ya. Wee pịa F5 ma ọ bụ họrọ "_1_281_1 _"> "Player Ntọala" ịgbanwe ụfọdụ ndabara ntọala nke "Izugbe", "Play", "Associations", "Hot Key", "snapshot" na "Update" dị ka gị mkpa.
2 na-emeghe gị MKV Files
Ịgbakwunye HD faịlụ ka playlist. Ị pụrụ ime nke na otu nke na-esonụ ụzọ:
Mgbe wụnye Wondershare Player na kọmputa gị, gị niile video na ọdịyo faịlụ na-metụtara ya ndabara. Ya mere ị pụrụ nnọọ abụọ pịa lekwasịrị MKV faịlụ imeghe ya. I nwekwara ike pịa "Open faịlụ" button na isi interface Ibu Ibu gị MKV faịlụ.
NDỤMỌDỤ: Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe ndabara mgbasa ozi ọkpụkpọ gị mbụ otu, pịa "_1_281_1 _"> "Player Ntọala"> "Associations" ịhọrọ "Họrọ Ọ dịghị onye", mgbe ahụ kụrụ "OK".
3 Ejikwa playback
Wondershare Player Nwere a dị ọcha na mfe na-eji interface ka ị mfe ịchịkwa gị playback. Mgbe gị MKV faịlụ a na-egwuri, ị pụrụ ịchịkwa play site mfe òké click na ihuenyo:
Right pịa na ihuenyo, mgbe ahụ, a na-achịkwa panel ga-apụta. Ebe i nwere ike na-emeghe ọzọ media faịlụ, ịgbanwe playback mode, ibu ma hazie ndepụta okwu na ịtọ audio ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
Hover òké na top, a akara mmanya ga-gbapụta n'ihi na ị na-ahọrọ playback mode (ihuenyo zuru ma ọ bụ Obere mode) na ihuenyo size (ọkara size, mbụ size, otu na ọkara size na abụọ size).
OK, na ọ bụ ya. Ugbu a dị nnọọ ibudata Wondershare Player na cozily enwe gị videos!